Bitcoin Debit Card Comparison 2018 - Bitcoin Sary nahazoan-Card
Bitcoin Debit Card Comparison 2018 Bitcoin Sary nahazoan-Card – Buy Bitcoin miaraka amin'ny Sary nahazoan-Card
TOP Bitcoin Debit Card – Sandam-bola ny Crypto Card Comparison
Bitcoin no vola ny aterineto – ary amin'ny Bitcoin carte de crédit, dia afaka mandoa na aiza na aiza maneran-tany izay Sary nahazoan-- na Debit Cards dia nandray ny Crypto Sandam-bola ny safidy. Rehefa miaraka amin 'ny Bitcoin Wallet, dia azonao ovaina momba ny 95% ny asa rehetra ara-dalàna dia afaka koa manome Banky anao.
Noho ny fahasamihafana lehibe fa ianao dia manana ny fanaraha-maso tanteraka ny vola sy ny fifandanjana tsy misy olona hafa. Izany no ara-bola ny hoavin'ny. Ankafizo ny fahalalahana. Raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny mividy ny Bitcoin Card, ho azo antoka mba hahitana ny “Ahoana no mifidy” mpitari-dalana amin 'elow.
Spectrocoin Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Firenena rehetra manerana izao tontolo izao tafiditra
+ Apps azo mpampiasa finday Windows koa
+ Company de crédit tsy ampy
– lafo fandefasana
– Scam tatitra sy ny fitarainana
– Nanjavona ny vaovao avy amin'ny tranonkala
Anonymous Card: Eny
Plastic Card: Eny
Virtual Card: Eny
Card Price: Plastic $9.00/8.00 € / £ 6.00 – Virtual $0.50/0.50 € / £ 0.50
vola: USD, EUR, GBP
Raharaham-barotra Foreign Saram-: 3%
Loading Saram-: Free
Saram isam-bolana: $1.00/1.00 € / £ 1.00
Cryptopay Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Telo lehibe vola (EUR, GBP, USD) rehetra alalana
+ Free ny fandefasana izao tontolo izao-ny sakany
+ Website natao tsara sy mora ampiasaina
– EU olom-pirenena ihany
– ambony vidiny
– Raharaham-barotra Foreign saran'ny
Card Price: Plastic 15 € / £ / $ – Virtual 2.50 € / £ / $
vola: EUR, GBP, USD
Loading Saram-: 1%
Saram isam-bolana: $1
WageCan Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Azo firenena maro ao anatin'izany ny USA
+ Mpanorina amin'ny teknolojia mafy fototra
+ Misy amin'ny USD, EUR, GBP
+ Bonus fandaharana
– Karatra lafo saran'ny
– Information dia sarotra hita ao amin'ny tranonkala
– Ny karatra dia mora vidy kokoa avy tahiry
AdvCash Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Tsy misy saran'ny fikojakojana isam-bolana
+ RUB toy ny misy vola
+ Free ambony niakatra avy SWIFT / SEPA famindrana, sarany raikitra ho an'ny famindrana
– No fampiharana misy
– Firenena nanohana ihany EU
– Tsy misy fanazavana momba ny rafitra tompony na ny mpitantana
– Daily fetra amin'ny fividianana fa na dia mpampiasa voamarina
Card Price: Plastic $/€ 4.99 (14.99 rehefa 7 andro) – Virtual 1 + 0.99 $/€ famatsiam-bola
vola: EUR, GBP, USD, RUB
Raharaham-barotra Foreign Saram-: 2.95%
Loading Saram-: $/€ 0.99 isan-barotra
Saram isam-bolana: Free
CoinsBank Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ All-in-iray crypto mpamatsy amin'ny kitapom-batsy, fifanakalozana sy ny debit bitcoin karatra
+ Afa-tsy vola Fiat lehibe USD, EUR, GBP, ny karatra fanononana tsy ampy amin'ny RUB, CHF, AUD, JPY vola loatra, ary koa manome fahafahana litecoin kaonty
+ Maro karatra fanamarinana azo atao mifototra amin'ny ambaratonga
– Complex fa tsy mangarahara tompony sy ny rafitra hentitra
– Free fandefasana tsy ampy Premium ihany mpampiasa
– Mihatra amin'ny saram avo ampy sy ATM
Card Price: Plastic avy amin'ny $14.95 – Virtual avy amin'ny $2.95
vola: EUR, GBP, USD, RUB, CHF, AUD
Raharaham-barotra Foreign Saram-: From 2.5%
Saram isam-bolana: $0.95-$2.95
Uquid Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Misy amin'ny USD, EUR, GBP sy 40 altcoins samy hafa afa-tsy bitcoin
+ Mandritra ny fiainana tsy manam-petra sy ny ATM fividianana withdrawals
+ Maro Loading safidy
– Mahantra Ny teny anglisy no ampiasaina ao amin'ny vohikalany
– Tsy azo US mponina
– Fresh orinasa
vola: USD, EUR, GBP sy 40 samihafa altcoins
Loading Saram-: 1.5% – 5%
Xapo Bitcoin Card – Mpomba sy mpanohitra
+ Avo lenta ny fiarovana
+ Tsy misy ambony ny sarany
– Tsy voamarina no fetra ho an'ny mpampiasa aterineto sy pos varotra
– Xapo manohana Segwit2X
– US olom-pirenena voaroaka
Card Price: Plastic $20 / € 18 / £ 13
Inona no tsara indrindra ho ahy Bitcoin Card?
Ahoana no misafidy ny tsara Bitcoin Card mpamatsy?
Maro ny orinasa ary manomboka dehibe manome bitcoin debit karatra ankehitriny toy ny cryptocurrencies dia nahazo bebe kokoa ny lazany.
Misy hevitra iray ho bitcoin te--debit cardholder mety mila hitady rehefa nitady ny tsara indrindra mpamatsy. Ny karatra manambara ny ankamaroan'ny mpamatsy vaovao izany eo amin'ny toerana, Ka dia samy mila ny mamaky azy io fotsiny amin'ny alalan'ny tsara. Mialà fototra vaovao ny karatra issuer orinasa.
Ny hevitra rehetra ambadiky bitcoin sy ny vahoaka blockchain masiaka natao tamintsika dia tsy fatokisana. Dia bitcoin debit cardholders matetika kokoa mampiahiahy mpanjifa noho ny mpanjifa amin'ny indostria. Ary noho izany dia tsy maintsy handresy lahatra ny mpamatsy ny ho avy mpanjifa fa manome legit, asa mendri-pitokisana.
Matetika ny mpanome tolotra manolotra tolotra mihoatra noho ny karatra. Ny olon-drehetra dia manana kitapom-batsy, fa ohatra Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo dia samy mihazakazaka avokoa ny bitcoin fifanakalozana bitcoin mivantana manome fahafahana ny fividianana amin'ny alalan'ny tranonkala. Raha tsy izany mpampiasa no handova cryptocurrencies alohan'ny pamatrarana azy ireo ny tsirairay debit bitcoin karatra.
AdvCash bitcoin debit karatra manana ny telo lehibe toy ny Fiat vola USD, EUR sy GBP no aneken'ny rehetra mpanome tolotra. RUB no nivoaka fahita indrindra vola, Rosiana mpampiasa dia mety hanafatra AdvCash bitcoin debit karatra izay ny kaonty dia denominated in RUB.
Plastika sy ny virtoaly karatra eny an-tsena. Ny karatra plastika dia azo ampiasaina ho an'ny ATM withdrawals sy ny fividianana an-tserasera, ny virtoaly karatra dia azo ampiasaina amin'ny aterineto ihany. Tsy very maina alohan'ny hanaovana sonia ny fanamarinana na ny mpanome namoaka ny karatra plastika na virtoaly ihany no safidy tsy ampy.
Tamin'ny bitcoin maro debit karatra mpamatsy, Mety hampiasa mpampiasa ny tolotra na dia tsy misy fanamarinana ny maha manokana, na tamin'ny sasany Applied limites. Fetra ireo dia ahitana isan'andro, isam-bolana ary ny androm-piainany eo amin'ny vola withdrawals fetra na pos fividianana. Raha tsy izany ny dingana atao fanamarinana amin'ny alalan'ny fandefasana ny porofo ny maha amin'ny endriky ny karatra ID-pirenena sy ny porofon'ny ponenana izay mety ho jiro volavolan-dalàna avy amin'ny lasa 3 volana tao ankamaroan'ireo tranga. Ny fotoana ilaina mba fanamarinana dia afaka miovaova be dia be, avy amin'ny roa ora na dia 10 andro.
Bitcoin Debit Card, izay misafidy?
Noho ny fitsipika sy ny lalàna olana mpampiasa any Etazonia dia voahilika avy amin'ny asa, afa-tsy amin'ny CoinsBank izay manome tolotra voafetra ho US olom-pirenena.
Ny fandefasana ny vidin-karatra plastika no naorina sarany hafa, fandefasana ara-dalàna toy izany matetika maimaim-poana, ny mpanome tolotra momba ny fiampangana 45-70 USD for expedited fanaterana safidy.
Ny ankamaroan'ireo ny mpanome tolotra finday avo lenta manana Apps misy mba hahazoana antoka mpampiasa mifehy ny lafiny ara-bola avy amin'ny finday avo lenta. Matetika iOS sy Androids fampiharana no nanome, fa ireo mpampiasa finday Windows mety Ilainao ny mikaroka bebe kokoa, tahaka ny ihany no azo Spectrocoin mpanjifa.
Card Pricing sy ny raharaham-barotra Fees
Ny olana karatra voalohany no miainga amin'ny saram 5 USD ny 20 USD eo ho eo amin'ny 10 USD. Ny sasany ihany no manome virtoaly karatra, fa izay ihany no vidiny 0.5 USD.
Amin'ny mpamatsy sasany ho tsy mavitrika ny karatra dia tsy voasazy fa maro Mampianiana fanampiny saran'ny noho ny tsy mavitrika. Mpampiasa tsy mavitrika dia ireo izay tsy transacting na dia indray mandeha ao anatin'ny roa taona miaraka amin'ny karatra.
Mpanjifa dia afaka pamatrarana ny karatra amin'ny tariby famindrana na SEPA famindrana ny sarany manodidina 0.5%-1%. Mpanome tolotra sasany dia mihatra fisaka tahan'ny, ka mpanjifa dia tokony hihaino tsara ny isan'ny sy ny habetsaky ny vola nafindra avy ao amin'ny kitapom-batsy kaonty ny debit karatra. Misy ny safidy mba hampidiran'izy sy notaterina tamin'ny mpanome tolotra fandoavam-bola hafa toy ny Skrill, Neteller na PayPal. Ny sasany bitcoin debit karatra, na izany aza ny Pricing dia ambony kokoa noho tariby famindrana, dia afaka ny ho 1% ny 5% isaky ny varotra.
Ny karatra debit bitcoin mpanome tolotra ireo mpampiasa Mandray soa rehefa misy transacting amin'ny karatra. Na dia ny fividianana matetika amin'ny aterineto maimaim-poana, fa ny sasany Mey nasain'i saram tamin'io koa. ATM dia nandrara foana amin'ny lafiny iray hafa. Ny vola an-toerana withdrawals manodidina 2-3 USD, ny iraisam-pirenena dia withdrawals 3-4 USD, dia azo atao ihany koa ny sarany raikitra dia ampiharina afa-tsy isan-jato. Raha ny fividianana na ny fanesorana vola no hafa noho ny toerana misy anao vola ny tantara mpanome tolotra rehetra Mampianiana fanampiny tahan'ny fanakalozam-bola 3%.
Feedback Client sy ny User Experience
Asa fanompoana tsara dia manomboka amin'ny tsara fipetrahana pejy. Tokony ho mazava tsara inona ny asa fanompoana sy ny be vola manao izy. Ny mpanjifa mampiasa ny vohikala mba hahita fampahalalana manan-danja momba ny asa nomena. Afa-tsy sakafo rafitra mazava sy FAQ; mpamatsy dia tokony ahitana ny fikarohana miasa ao aminy. Customer fahafaham-po dia tena miankina amin'ny fanohanana nomen'ny debit ny bitcoin karatra issuers, toy ny rafitra Ticket, Hotline Live amin'ny chat.
Maro ny mety ho bitcoin karatra mpamatsy afaka manolotra noho ny mpanjifa. Ny tsara indrindra karatra bitcoin debit dia miankina amin'ny mpamatsy manokana ny mpampiasa ny zavatra ilain'ny.
natao ny Themient